Indlela ukutshala apula izihlahla kanye ilungelo lokukhetha yisithombo
I-apula kuyinto isihlahla ngempela namawashi ahlekisayo, futhi isidingo owokuqala ukubuza nje ukuthi yini izinhlobo ukuze isitshalo, kodwa futhi ukutshala apula izihlahla ngendlela efanele. Phela, kusukela okutshalwe professional incike 80% isivuno sokuqala. Kodwa ngalolo kamuva, okokuqala udinga ukukhetha yisithombo ezinhle.
Yini ukubheka uma uthenga apula yisithombo
Isihlahla kufanele kube okunempilo kanye namagxolo, mayelana 1.5 amamitha eliphezulu. Le ngokuxhunyelelwa isezingeni ibanga kusukela empandeni at 7-8 cm umqhele amagatsha 4-5. Roots kufanele kube nenala. Khetha izinhlobo eziqinile kuphela. Qiniseka ukuthola lapho ohlangothini lwaseningizimu izithombo, kubalulekile ikakhulukazi fructification yayo. Iqiniso lokuthi okutshalwe, kubalulekile ukubeka ezinhlangothini zomhlaba njengoba lalikhula laze egumbini lezingane. Kungenjalo kwesihlahla kuyoba isikhathi eside ukuba imile izimpande futhi ngemva kweminyaka embalwa uthela izithelo.
Izinto ukwazi lapho ekhetha indawo wokutshala kwakunezigqiki ezithambile
Lapho isihlahla sama-apula inamakhasi, qiniseka uzisuse. Ekunqumeni ukuthi nalokho Tshala engadini, skimp on isikhala isihlahla esizayo akunakwenzeka, njengoba isitshalo ngasinye onqobayo esikhundleni sakhe phansi kwelanga. Futhi uma apula zisondelene kakhulu khona, ngaleso sikhatsi bafundza bacala lokucindezela komunye nomunye. Ngesizathu esifanayo, musa itshale kwakunezigqiki ezithambile eduze kwesihlahla omdala. Nokho, eduze izindlela engadini ukuthi kakhulu is hhayi Kunconywa ukuba amagatsha emithi omdala musa vimbela ndima ke. Enye engathandeki ezikhulayo apula izihlahla ezindaweni lapho kakhulu ibekwe komhlaba. Lo muthi uhlelo impande yokuzenzela, izinkomba ezimbili: evundla mpo. izimpande ovundlile ukuhlinzeka amanzi emvula futhi izakhamzimba ezihlukahlukene wangaphezulu. Kuqondile ukunikeza apula ukuzinza. Uma enhlabathini ziphezulu, izimpande mpo, ukufinyelela kubo, kunciphe bese zibola, ngakho "yobudala" emthini kuyoba isikhathi esifushane.
Indlela ukutshala apula izihlahla on njalo
Ngakho, ukwahlukanisa indawo yami, umba imigodi zokutshala. Ukujula kudingeka 1 imitha ububanzi 1-1.5 m. Lo mgodi kuyadingeka ukuze ugcwalise ingxenye nenye umquba, Peat kanye humus. Okulandelayo, hlanganisa inhlabathi evamile ukuze collar impande ngaphezu komhlaba. Kungcono ngaphambi kokufika maphakathi imbobo ukushayela esigxotsheni lokhuni ke ukulungisa yisithombo. Futhi ungalokothi ukukwenza emva zokutshala isihlahla: kungalimaza ohlelweni impande. Manje ngomusa uthepha phansi phakathi futhi emaphethelweni unamathelise namandla.
Indlela ukutshala apula izihlahla, uma ukukhula kwabo akwaziwa ukhadinali egumbini lezingane
Uma ungazi kahle indlela yokutshala yisithombo enkulisa, le kwegatsha kuwo kufanele iqondiswe eningizimu. Uma ihlumela elisenkabeni ye isitokwe ke thola impande thickest eningizimu. Ngakho cishe ziyothambekela kakhudlwana ukuthi umuthi itshalwe kahle. Kungenjalo okungalungile "ngamakhasimende" yisithombo kuyothatha isikhathi eside ukuba imile izimpande futhi bathele isithelo ngokuphindwe uzoqala iminyaka 2-3 kamuva, kwenzeka ukuthi iminyaka engu-10 ye nomuthi okhula ku awunalutho.
Ngemva betshala zonke emgodini kudingeka bechitha amanzi kuze kube inhlabathi ngeke ukukuqonda. Kwesinye isikhathi kuthatha ama-70 wamalitha. Khona-ke udinga amboza indawo zokutshala salokhu kusebenza utshani obomile humus. Futhi endaweni ethile ezinsukwini 5-7 lomuthi, ungakwazi ukukhohlwa. Kodwa kulesi sikhathi kokwehla indawo kubalulekile futhi bechitha copiously ngamanzi. Manje, niyazi ukuthi ukutshala apula izihlahla futhi indlela yokukwenza kwesokudla.
Lesitshalo nezinhlobonhlobo daylilies: incazelo, ukunakekelwa ngokukhethekile futhi kulinywe
Uchungechunge oluthi "Kuyinto Njalo Sunny laseFiladelfiya": nabalingisi izindima
"Wazo": ukuwudlulisa izici umdlalo omuhle kakhulu
Jake Johnson biography, umsebenzi, impilo siqu
Antigua and Barbuda kumephu zomhlaba: inhlokodolobha, ifulege, uhlamvu lwemali, yisakhamuzi ezihehayo isimo isiqhingi. Uphi uhulumeni Antigua and Barbuda nokuthi Izibuyekezo ngakho?
Isikhunta nezezinzwane: izindlela zokwelashwa
Uhambo lokuya nokubuya Georgia ngemoto esuka eMoscow umzila, isithombe, ukubuyekezwa
Nizhny Novgorod, "Salvador Dali" (yokudlela-club Karaoke): Ikheli, ukubuyekezwa
Zombhede benziwe ngoqalo - izinzuzo kanye usizo